निन्द्रा लाग्दैन ? तपाईंलाई यो फलको कमी भएको होला - Aarthiknews
एजेन्सी । यदि तपाईं सुत्न सक्नुभएको छैन ? तपाईं रातमा थोरै निद्रा लाग्छ भने पक्कै आफ्नो आहारमा पर्याप्त किवी फलहरू पाउनु भएको छैन । भर्खरको एक अध्ययन अनुसार सुत्नुभन्दा एक घण्टा अघि दुई वटा किवी फलफूल खाँदा तपाईलाई छिटो सुत्न र अझ राम्ररी निदाउन मद्दत पु¥याउँने तथ्या पत्ता लगाएको छ ।
एक महिना लामो अध्ययनमा ताइवानको ताइपे मेडिकल विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूद्वारा गरिएको थियो । उक्त अध्ययनमा २० देखि ५५ वर्ष उमेरका बीचमा २२ महिला र २ पुरुषको बीचमा अध्ययन गरेपछि सबैले अवरोध निद्राको कुनै न कुनै प्रकारको अनुभव गरिरहेको पाइएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए अनुसार दैनिक रूपमा किवी खानु निद्राको गुणस्तर र मात्रामा पर्याप्त सुधारसँग जोडिएको पाएका थिए । अध्ययनमा स्वयंसेवकहरूले सुत्नभन्दा एक घण्टा अघि दुई किवीहरू खाए र त्यसपछि निद्राको अनुभाव लेख्न डायरीमा निन्द्राको गुणस्तरका बारेमा प्रश्नावलीको उत्तरको माग गरिएको थियो । उनीहरूले निद्राको मात्रा र गुणस्तरका विभिन्न पक्षहरू नाप्नका लागि रिस्टवाच पनि लगाएका थिए । उक्त अध्ययनको अवधिमा किवी खाएकाहरु छिटो निदाउँथे ।
यो अस्पष्ट छ कि किवीहरू जसले राम्रो निद्रा लगाउन मद्दत गर्दछ, तर अन्वेषकहरूले यसको उच्च एन्टीआक्सीडन्ट स्तर र यसको उच्च सेरोटोनिन स्तरहरू पाएका छन । निद्राका लागि सकारात्मक प्रभाव भएको रूपमा एन्टिअ‍ोक्सिडन्टलाई बृद्धि भइरहेको देखाएको छ । सेरोटोनिनको उच्च स्तर पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ किनकि सेरोटोनिनले निद्रा शुरु गर्न र रातमा राम्रो निद्रा लगाउन योगदान पु¥याउँछ । यसले निद्राको चरण आनन्द दिलाउन र बिहान ब्यूँझनलाई उत्प्रेरित गर्न पनि भूमिका खेल्छ ।